Home Wararka MW Farmajo oo aan wali ka Hadlin ma loo Macneynsan karaa...
MW Farmajo oo aan wali ka Hadlin ma loo Macneynsan karaa inuu Fashilay Kulankii Madaxweynayaasha?
Waxaa iska caado ahaan jirtay in Madaxtooyada Iyo MW Farmajo midkoodna uusan ka hadal waxa ay qabtaan iyo kulamada ay galaan. Haddabba kulankii dhex maray isaga Iyo Madaxweynayaashii hore looma macneysan karo inuu guldareystay maadaama ay warbixin dhameystiran soo saareen labadii Madaxweyne ee la kulamy madaxdweynaha Talada dalka haya.
Dhinaca kale muhimadda uu kulankaa wasza ka hadlay wakiilka QM ee Somalia James oo yiri “… waxaan soo dhoweynayaa kulankii shalay ee madaxweyne Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee ka horeeyey, waxaana dhiir-gelinayaa wada-tashiyo kale oo noocan ah.” Sidoo kale Madaxtooyada ayaa iclaamisay kulanka, mana diidin qodobadii uu saxaafadda la wadaagay MW Xasan sheekh Maxamuud, waana iska caddaan inay ku faraxsanayd oo raalli ka tahay.
kulanka waxaa uu todobaadkan ku dhex maray xaraunta Madaxtooyada Somaliya MW Framajo iyo Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ka socdeen Guddoomiyaha Madasha MW Sharif iyo MW Xasan sheekh Maxamud. Kulanka waxaa la sheegay inay ka soo baxeen qodobadaan:
1 – Madaxweyne Farmaajo waxa uu ka garaabay, raali gelinna ka bixiyey is-hortaagyo madaxdii hore ee dalka lagu sameeyey xilli ay doonayeen inay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde. Waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca hogaan wanaagga dalka.
2 – Waxaa la isla gartay in doorashooyinka hay’adaha dastuuriga ah oo dhan ay xiligooda ku dhacaan. Dhamaan dowlada federaalka, dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeedna ay ka heshiiyaan noocaa doorashada. Waa qodob kale oo muhiim ah.
3 – In la dhowro dastuurka, xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed. Islamarkaana taas ay si isku mid ah u ilaaliyaan dowladda iyo xisbiyada mucaaradka. Dhinaca xisbiyada waa lagu khsabi karaa inay distuurka ilaaliyaan waana ilaalinayaan , laakiin yaa Kheyre, Fahad iyo Hay’adaha amniga ku khasbi kara inay ilaaliyaan ayaa la isweydiinayaan
4 – Inaan hay’adaha amniga loo adeegsan siyaasadda, islamarkaana siyaasiinta aysan siyaasadeysan amniga.
5 – In meel looga soo wada jeesto la-dagaalanka Al-Shabaab, islamarkaana si wadajir ah looga shaqeeyo amniga. Qodobkaan dadka wax dhaliilaa waay leeyihiin Alshabaab iyo Dowladda waa iksu milmeen mana lakala saari karo.
Haddaba shacbiga badankood waxay arrintaan ugu muuqataa inay ahayd tallaabo wanaagsan oo la qaaday, una baahan in la dhaqangeliyo. Sida caadada ah waxaa la helayaa dad ka soo horjeesta qaabka ay wax u dhaceen, hasa yeeshee guud ahaan waxay u muuqadaan in la gaaray horumar siyaasadeed haddii ay madaxda dalka ugu muuhiimsan ay ka wada tashan karaan sida loo xallinayo marka ay xaajo murugto.
Dhaliilaha dadka qaar waxay ahaayeen in MW Farmajo ama madaxtooyada aysan war ka so saarin kulanka, laakiin waligeedba ma dhicin inay madaxtooyada war ka soo saarto hawlaha ay qabato iyo kulamada ay la gashao madaxda. Sidaas darted looma xujeysan karo inuu kulankaan ahaa waxba kuma yaal.
Waxaa la hubaa in labada madaxweyne ee hore ee MW Xasan Sheekh iyo MW Farmajo ay kala garan karaan dhab u hadalka cidda ay la kulmeen iyo dhalanteedka taasina ay cadeyneyso in wadahadallada ay ahaayeen miradhal mar haddii ay ku soo qanceen iyadoo fulinta qodobada ay ku kala xeran tahay labada qolo ee kulmay sida ay u dhaqan geliyaan.
Runtii wadahadalka iskama iman ee culeys ayaa keenay, haddii wixii wadahadalka ka soo baxay aan lagu xallinin culeyskaas waa taagnaayaa, taasina waxay muhiim ka dhigeysaa in culeyskii la xalliyo iyadoo loo marayo dariiqii lagu heshiiyey.
Waxa lagu heshiiyeyna guud ahaan Waa qodob muhiim u ah fayaqabka siyaasadda dalka, hasa yeeshee waxaa dad badani ay u arkaan inaysan Farmajo ka suuragelin Karin inuu fuliyo Ballamada uu galo. Waxayna ku doodayaan aaway kuwii Barlamanka 329ka qof ah iyo 15 milyan oo Somali ah uu hortooda ka galay oo wada been ahaa. Sidaas darted MW Farmajo kama suuragsho inuu fuliyo qodobadaan iyo wax u dhow, haddii aysan cabsi iyo culeys kale u geyn.
Waxaa haboon in MW Farmajo lagu amaano inuu kulankaan qabtay uuna ugu yaraan dhageystay raggii talada kaga horreeyey, taas oo u muuqata inuu Madaxweynaha uu soo gaaray xelli uu dareemayo in xal loo baahan yahay lagana raadiyo Meesha ugu mudan iyo dadka ugu mudan ee lagu tuhmayo talo wanagsan oo daacad u ah dalkaan.
Sidaas darted waxaa haboon in waqti la siiyo labada dhinac ee wax ku heshiiyey, lagana sugu fulinteeda.